နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: 2011
Turn your iPhone Signal Bar to Readble Digit Format
အိုင်ဖုန်းသုံးစွဲသူများအတွက် ဒီတစ်ခေါက်တော့ မိမိတို့ရဲ့ အိုင်ဖုန်းလိုင်းဆွဲအား ဘယ်လောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကို သိသာအောင် ဂဏန်းနဲ့ ပသတဲ့ Function ကို activate လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေး ပြပါမယ်။
လောလောဆယ်တော့ iPhone 4S ရဲ့ iOS5ကနေ စမ်းသပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့ကတော့ iPhone4လဲ အလုပ်လုပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အကယ်၍ တစ်ခြားသော ဖုန်း အိုအက်စ်တွေမှာလဲ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင် ကော်မန့်မှာ လာရေးစေလိုပါတယ်။
လုပ်ဆောင်ပုံ လုပ်ဆောင်နည်း အဆင့်ဆင့်ကို အောက်မှာ ပြထားပါတယ်။
ဖုန်းနံပါတ်နှိပ်ရတဲ့ နေရာကနေ *3001#12345#* ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီနောက် Call ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
2. Field Test Mode ဆိုတဲ့ Apps လေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီချိန်မှာပဲ အပေါ်က signal bar လေးဟာ ဘားတန်းကနေ ဂဏန်းနံပါတ် အဖြစ် ပြောင်းသွားတာကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီနံပါတ်ဟာ Decibel အပေါ် အခြေခံထားတာဖြစ်လို့ သုညနဲ့ နီးလေ ဖုန်းရဲ့ လိုင်းဆွဲအားကောင်းလေ ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါမယ်။ ဘားတန်းကို ပြန်ပြောင်းချင်ရင် အဲဒီ ဂဏန်းလေးကို toggle နှိပ်ပေးရုံနဲ့ ပြန်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီဖန်ရှင်ကို အမြဲတမ်း On ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က နံပါတ်သုံး အတိုင်းဆက်လုပ်ပါ။ ဒါမှ မဟုတ် ဖုန်း နဂိုမူလအတိုင်း ပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် Home Button ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ (Field Test Mode ထဲက ဖိုလ်ဒါတွေကို ဘာမှ သွားမကလိပါနဲ့။ အဲဒီ အပိုင်းက တတ်ကျွမ်းတဲ့ Test Engineer များအတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ မသုံးတတ်ရင် ဖုန်း ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။)
3. 'Slide to Power Off' ဆိုတဲ့ Bar မပေါ်မချင်း Power Button ကို နှိပ်ပေးပါ။ ဖုန်းကို ပါဝါ မပိတ်လိုက်ပါနဲ့။
4. Field Test ဆိုတဲ့ apps မပိတ်မချင်း Home Button ကို နှိပ်ပေးပါ။
တစ်ခါတစ်လေ မိမိရောက်နေတဲ့ နေရာက ဖုန်း signal ကောင်းကောင်းမမိတဲ့ နေရာ ဖြစ်နေခဲ့ရင် လိုင်းဆွဲအားကောင်းတဲ့ နေရာကို စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ နတ်ပင့်သလို ဖုန်းကို မြှောက်မြှောက်ပြီး ရှာနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
အဲဒီ ဂဏန်းတန်ဖိုးက သုညနဲ့နီးလေ လိုင်းဆွဲအားကောင်းလေပါပဲ။
အကယ်၍ ဖုန်း Signal Default Bar ကို ပြန်ဖြစ်စေချင်ရင်
*3001#12345#* ဆိုတဲ့ ဂဏန်းကို ရိုက်ထည့်ပြီး Dial ကို နှိပ်ပေးပါ။
Home Button ကို တစ်ချက် ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဖုန်းက နဂိုမူလ Default Signal Bar ကို ပြန်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
စာကြွင်း ။ ။ ကျွန်တော့်ဖုန်းမှာတော့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်က ပြထားတဲ့ ပုံတွေက ကျွန်တော့်ဖုန်းက screen shot ရိုက်ပြီး တင်ထားတာပါ။ လူကြီးမင်းတို့ ဖုန်းမှာ စမ်းသပ်ကြည့်လို့ တစ်ခုခု ချွတ်ယွင်းချက်များ ဖြစ်ပေါ်ပါက ကျွန်တော်မျိုးနဲ့ မဆိုင်ပါကြောင်း...။ :D
ရေးသားသူ Ko Boyz at 8:56 PM7ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: apple, ios 5, iPhone, Phone, tech, Telecommunication
Just For Laughs.. ဘဝအမောများ ပြေစေဖို့...။
တစ်နေ့တာ ဘဝအမောလေးတွေ ပြေနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရယ်ရပါတယ်။ အမောပြေပါတယ်ဆိုရင် တင်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ :)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:37 PM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Untethered Jailbreak for iOS5တဲ့။
iPhone 4s , iPad2နဲ့ iDevices တွေ အကုန် ရတယ်တဲ့။
ကိုယ်တော့ ဇော်ဂျီ ios5 ပေါ် ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်မှ စမ်းမယ်။
But I don't think this is true. I better wait from redsn0w team. ;)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 7:46 PM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: apple, ios 5, ipad, ipad 2, iPhone, jailbreak
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်များဆီက ကြိုက်တတ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါ...။
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အနုပညာရှင် စောဘွဲ့မှူး ရေးစပ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ပေါ့..။
စောဘွဲ့မှူး ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက် သူ့အတွက် အမှတ်တရ သီချင်းအယ်လ်ဘမ် စီစဉ်ရာမှာ... စောဘွဲ့မှူး အမှတ်တရ (၁)နဲ့(၂) ဆိုပြီး တေး စီးရီးစ်စ်ခွေ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုသီချင်းက အဲဒီ အမှတ်တရထဲက သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါ...။
အဆိုတော် ပေါင်းစုံ ဝိုင်းဖွဲ့ ဆိုထားတာပါ....။
စောဘွဲ့မှူး သီချင်းတွေနဲ့ သီဆိုအောင်မြင်လာတဲ့ အဆိုတော်တွေ အများစု ဝိုင်းဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပေါ့...။
လေးဖြူကတော့ စောဘွဲ့မှူး သီချင်း မဆိုဖြစ်ခဲ့ဘူး ထင်တယ်။ သူက စောဘွဲ့မှူး ထောင်ထားတဲ့ Iron Cross တေးဂီတနဲ့ပဲ ပတ်သက်မှု ရှိတယ် ထင်တယ်။ အငဲလဲ ထိုနည်းတူပဲ ထင်ပါရဲ့။
ဒါပေမယ့် မြန်မာ့စတီရီယိုခေတ်မှာ မှတ်တိုင် တစ်ခု စိုက်ထူခဲ့တဲ့ စောဘွဲ့မှူး အမှတ်တရ အခွေထဲမှာ သူတို့လဲ ဝိုင်းပြိး ဂုဏ်ပြု ဆိုထားပါတယ်။
ဖင်စီဒိုင်းတို့ ငါ့အသည်းကို မြန်မြန်ခွဲပါတို့ က လေးဖြူနဲ့ အငဲ ပြန်ဆိုထားတာပဲ။
အခု သီချင်းလေးမှာ အဲဒီတုန်းက ခေတ်ပြိုင် ရော့ခ် အဆိုတော် လေးဖြူနဲ့ ဇော်ဝင်းထွဋ်တို့ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ဆုံပြိး တူတူဆိုဖြစ်တဲ့ သီချင်းလေးပေါ့...။
ဒီသီချင်းအတွက် Arrangement ကို ထူးအိမ်သင်က ဦးစီးလုပ်ဆောင်တယ်လို့ သိရတယ်။
အဆိုတော်တွေ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့.. သူ့ထက်ငါကောင်း ပညာစွမ်းတွေ ထုတ်ကြတာ တွေ့ရတယ်။
အငဲ၊ လေးဖြူနဲ့ ထူးအိမ်သင်တို့ရဲ့ ဆိုပေါက်နဲ့ ဟာမိုနီ လိုက်တာကို သဘောအကျဆုံးပဲ...။
မေဆွိက အသံစူးစူးနဲ့ ဆိုထားသလို မေခလာက မာပြတ်ပြတ်နဲ့ ဝင်ချလိုက်တာ တစ်မျိုးကောင်းတယ်...။
ပိုးဒါလီသိန်းတန်ကတော့ သူ့စတိုင် ကြည်အေးအေးလေးနဲ့ ဆိုသွားတယ်။
ကော်နီကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ရှတတနဲ့ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ဆိုပေးတယ်။
မာရဇ္ဖက နာမည်ခံလောက်ပဲ ထင်ပါရဲ့.. သိပ်မပြလိုက်ရရှာဘူး...။
မူရင်း မျိုးကျော့မြိုင် ဆိုတဲ့ ဗားရှင်းထဲမတော့ သီချင်းဆိုလို အပိုဒ်မှာ ဗိုလ်အောင်ဒင်ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်း စကားပြောတွေ ထည့်ထားတယ်....။
ဗိုလ်အောင်ဒင်က သူ့တပည့်ရာမက သူ့ကို ခြေရာတိုင်းချင်တဲ့ အခန်းထဲကဟာပေါ့...။
"လွယ်သလား ခက်သလား ရာမ.... ဒီမှာ ရာမ ဗိုလ်လုပ်ချင်တဲ့ ကောင်ဆိုတာ ဟောဒီလို သေနတ်ကို လက်ညိုးလေးနဲ့ ကွေးကွေးလေး" ဆိုပြီး ဘာညာ ဘာညာ ပြောတဲ့ စကားတွေ ထည့်ထားတယ်...။
ကိုယ်တွေက အဲဒီ စကားပြောကို ဖျက်ဆိုကြတယ်။
ဒီမှာ ဗိုလ်လုပ်ချင်တဲ့ ကောင်ဟာ ဗိုလ်သင်တန်း တက်ရတယ်ကွ.. ဆိုပြီး ဘာညာ... (ဒါက စကားမစပ်ပါ။)
သီချင်း သီဆိုသူနဲ့ ဆိုထားတဲ့ အပိုဒ်လေးကို နားထဲ ကြားမိသလောက် ပြန်ချရေးလိုက်တယ်။ မှားနေရင် ခွင့်လွှတ်...။
ဝလုံးကလေးမှ ဝိုင်းအောင် မရေးနိုင်ခင် ရွှေလင်ဗန်းနဲ့ ထမင်းဆီဆမ်းရယ်...။ (ဇော်ဝင်းထွဋ်)
အမေဆိုပြလိုက်တော့... ရွှေသားအတိပြီးတဲ့ လင်ဗန်းကြီးပဲ မက်မောကာ... ( လေးဖြူ)
ဝိုးဝိုး..ငါဟာ လောဘတက်လာတယ်။ (ထွဏ်းထွဏ်း)
ပုခက်တွင်းမှဆင်း မြေကြီးပေါ်နင်းခါစ ရွှေယုန်လေးနဲ့ ရွှေကျားပုံရယ်...။ (မေဆွိ)
အင်မတန်ကောက်ကျစ်တဲ့... ယုန်ဆိုးလေးကို သိပ်ပြီးအားကျနေခဲ့တော့ ငါဟာ ကောက်ကျစ်တတ်လာတယ်။ (မေခလာ)
ဝိုး.. မျက်လုံးတစ်ဖက် ကန်းနေခဲ့ပါရဲ့နဲ့ ဘုရင်ကို ဖမ်းပြီး အကျဉ်းချဝံ့သူ (ထူးအိမ်သင်)
ငရမာန်ကန်းကြီးအား အရမ်းဂုဏ်ပြုမိတော့ (မာရဇ္ဖ)
တို့ကျောင်းက သမိုင်းဆရာလေးတောင် လူပေလေးလို့ ငါ့ကိုခေါ်.... (အငဲ)
ဘိုင်စကုတ်ကြည့်တော့ လူကြမ်းကိုအံ့ကျော်ကို အလွန်တရာ နှစ်သက်တတ်ခဲ့တယ်။ (ကော်နီ)
ငါ့နံဘေးနားက ချစ်သူလေးကတောင် တစ်ဖြည်းဖြည်း ငါ့ကိုလန့်ကာ ကြင်နာတတ်မယ့် တစ်ယောက်ကိုရှာ (ပိုးဒါလီသိန်းတန်)
ဒီလိုနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် အမြင်တွေကို သုံးသပ်ရင်လူတွေအပေါ် (မိန်းကလေး သံပြိုင်)
ဝိုး ... ဘယ်သူက မှားပြီး မှန်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ... (လေးဖြူ၊ ထူးအိမ်သင် ဟာမိုနီ ဆိုသည်။)
အဆိုးနဲ့ အကောင်း တွဲနေတတ်တာကို မြင်နိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ (မိန်းကလေး သံပြိုင်)
ဒီအတွက် အကျိုးအမြတ်က အများတကာ မေးငေ့ါကာ (ထွဏ်းထွဏ်း)
အမြင်ကပ်လို့ မုန်းစရာ ဖြစ်ကာ (ဇော်ဝင်းထွဋ်)
အရိုင်းအစိုင်းအဖြစ် မြင်လာ။ (အငဲ)
ဝိုး.. သုံးသပ်ရင်းနဲ့... (ထူးအိမ်သင်)
ဘယ်သူက မှားပြီး မှန်တယ်လို့... (လေးဖြူ)
အိုး... သိပ်ခက်... (ထူးအိမ်သင်)
မြင်နိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ (ထွဏ်းထွဏ်း)
ဒီအတွက် အကျိုးအမြတ်က အများတကာ မေးငေ့ါကာ (ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ ထွဏ်းထွဏ်း)
အမြင်ကပ်လို့ မုန်းစရာ ဖြစ်ကာ.. (ဇော်ဝင်းထွဋ်)
အရိုင်းအစိုင်းအဖြစ် မြင်လာ (အငဲ)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:02 AM3ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: ange, connie, htoo ein thin, Lay Phyu, May Sweet, Myanmar, song
iOS : LabelSlide
မင်္ဂလာပါ ဘလော့ကြွလာ ပိတ်သတ်ကြီးတို့...။
မတွေ့ဖြစ်တာ တုတ်ထိုးစားပြိး နောက်ပိုင်းပဲ...။
အလုပ်ကလဲ မိုးလင်းက မိုးချုပ်ဆိုတော့ ဘလော့ဖက်ကိုတောင် မလှည့်အားဖြစ်တော့ဘူး။
ပို့အသစ် မတင်ဖြစ်ပေမယ့် လာလည်ပြီးတော့ ကော်မန့်လေးတွေ ချန်ထားပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
အခုကစပြီး တစ်ပတ်ကို တစ်ပို့စ်လောက်တော့ အနည်းဆုံးတင်ပေးပါ့မယ်။
အခုတစ်ပတ်တော့ ပန်းသီးထုတ်ကုန်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကလိဖြစ်တာလေးကို ဖော်ပြချင်ပါတယ်။
iPhone, iPad ကို စစချင်း ဖွင့်လိုက်ရင် Slide to Unlock ဆိုတာလေးကို ပထမဆုံးတွေ့ကြမှာပါ....။ အောက်က ပုံလေး အတိုင်းပေါ့နော်...။
ပုံမှန်ဆို ပန်းသီးက အဲဒါကို ပြင်ခွင့် မပေးပါဘူး။ အဲ့ထှာနဲ့ အနော်လဲ ထောင်ဖောက်လိုက်ပြီး နည်းနည်းကလိလိုက်တယ်။ အဲဒါ အခု ကျွန်တော့် အိုင်ပက်လေးထဲမှာ ဂလိုလေး လုပ်ထားလိုက်တယ်။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စာသားလေးတွေ ထည့်ပေးလို့ ရပါတယ်။
၁။ မိမိ အိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပက်တွေသည် JailBreak လုပ်ပြီးသား ဖြစ်ရပါမယ်။ (JailBreak လုပ်နည်းကို ဒီမှာ ရှု။ )
၂။ JailBreak လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် Cydia Store ထဲက LabelSlide ဆိုတာလေးကို ရှာပြီး အင်စတောလုပ်လိုက်ပါ။
၃။ ပြီးရင် Settings ထဲက General ကို သွားဖွင့်လိုက်ပါ။
၄။ အဲဒီမှာ LabelSlide ဆိုတာကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
၅။ အဲဒီ LabelSlide ကို ဖွင့်ပါ။
၆။ Enabled ဆိုတာကို ON လိုက်ပါ။
၇။ Custom Label ဆိုတာကိုလဲ ON လိုက်ပါ။
ပြီးပါပြီ။ တီထွင်ပေးတဲ့ iOS hacker ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မ
မရှင်းတာ ရှိရင်တော့ အောက်က ဗွီဒီယိုလင့်ခ်လေးကို ကြည့်လိုက်ရင် အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။
(ဗွီဒီယိုက ကျွန်တော် လုပ်ထားတာ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ :D )
စာကြွင်း။ ။ ဒီလို လေဘယ် ပြောင်းနည်းကို တင်ပေးဖို့ ပြောလာကြတဲ့ လူတွေကို အခုမှပဲ တင်ဖြစ်တဲ့ အတွက် အပြစ်တော် မမြင်ပဲ အချစ်တော် ဝင်ကြပါလို့....။ :)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:10 PM4ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: iOS 4, ipad, ipad 2, iPhone, jailbreak
Turn your iPhone Signal Bar to Readble Digit Forma...